Waqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaalada lidka maraakiibta - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWaqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaalada lidka maraakiibta
June 8, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Waqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaalada lidka maraakiibta. [Sawirka: Archive]
Pyongyang-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa dhanka bariga ee badeeda ku tijaabisay dhowr gantaal oo kuwa lidka maraakiibta ah, sida ay sheegeen milatariga Koonfur Kuuriya oo deris la ah Waqooyiga Kuuriya.
Masuuliyiinta ayaa sheegay in gantalkaa saakay oo Khamiis ah laga riday meel u dhow magaalada Wanson, lagana riday markab oogadiis.
Gantaalada ayaa jaray masaafo dhan 200km kahor inta aysan ku dhicin biyaha.
Khuburada ayaa ka cabsi qabta in tijaabadu ay muujinayso horumar ku saabsan in Waqooyiga Kuuriya ay yeelan rabto gantaalada qaada madaxyada hubka wax gumaada ee nukleerka.
December 26, 2016 Baadi goob balaaran oo ka socda Badda Madow kadib burburkii diyaarada Ruushka
At least three killed in Mogadishu land mine blast
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least three people, including two Somali government soldiers, have been killed and more than 2 others injured in a land mine blast in the Somali capital Mogadishu, sources say. According to the sources [...]